Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso "O rato de Roma". Indaba yethu ye-Felipe Anderson Yabantwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama ezindabeni ezidumile, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali webhola eligijima esheshayo, elihlelekile futhi elisezingeni eliphezulu. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Biography kaFilipe Anderson okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, igama lakhe eligcwele nguFelipe Anderson Pereira Gomes. UFelipe Anderson njengoba evame ukubizwa ngokuthi wazalwa ngosuku lwe-15th ka-Ephreli 1993 eSanta Maria, isifunda sokuphatha esifundazweni saseBrazil eBrazil. Wazalelwa kunina, u-Elza Pereira nobaba, u-Sebastião Tomé Gomes futhi bangabomndeni wasePardo waseBrazil (i-European Combined, Abomdabu, nabaseNtshonalanga Afrika).
U-Anderson wakhula nabafowabo ababili nodadewabo abane; UKarine, uJuliana, uSabrina noDudley. Ekuqaleni, kuqhubeke, ehlala eSanta Maria, idolobha lakubo eBrazil, akuzange kube lula kakhulu ngoFelipe nomndeni wakhe oyedwa ophakathi. Njengesikhathi sokubhala, okuningi kuye kwashintsha njengoba kubonisiwe esithombeni ngezansi.
Ukukhula, abazali bakaFelipe Anderson babenendima ebalulekile emfundweni yakhe. Omunye oqinisekisile ukuthi uthweswe iziqu esikoleni sakhe sasekuseni (Educação Infantil) ngaphambi kokubhekana nebhola lezinyawo ezaza njengethalenta eliluhlaza.
Ngesikhathi esikoleni, u-Anderson wayekhawulelwe ukudlala ibhola lomncintiswano ikakhulukazi ngesikhathi sezemidlalo. Ngesikhathi oNgesikhathi esikoleni, uzoqhubeka edlala ibhola lomgwaqo. Ngokuvumelana ne WuFC, U-Anderson ufunde futhi wabe esehlonipha amakhono akhe avelele kwezobuchwepheshe ngesikhathi ehlelekile emigwaqweni njengoba ngaleso sikhathi wayezungeze ikhaya lakhe.
"Ngakhula ngidlala ezitaladini nabangani bami, futhi ngicabanga ukuthi lokho kwaba nethonya kimi ngokwempela. Manje ngilapha, eYurophu, okwenza amaphupho ami agcwaliseke, "
Uqaphele iBrazil, ogama lakhe lebhola lomgwaqo elidlala emgwaqweni ekugcineni lihola amaholo njengoba evunyelwe ukuba ajoyine i-academy njengoba eqala ukudala.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala
Ngemuva kwemfundo yangaphambi kwesikole nokudlala ibhola lomgwaqo I-14º CPMIND, i-Federal ne-SCR
Gaminha Anderson sika Uthando lwebhola lezinyawo lambona ebhalisa iqembu leqembu lakhe lendawo yentsha I-astral EC okwamnika isisekelo sokusebenza esasidinga.
Esahlukweni esisha sokuthuthukiswa kwakhe kwentsha, u-Anderson ngemuva kokulingwa okuphumelelayo wanquma ukulandela ezinyathelweni ze UPele, Zito kanye Neymar ngokujoyina iqembu le-Santos elimangalisayo ngesikhathi se-13. Ekhuluma ngale nqubekela phambili yentsha eyimbonile edlala ensimini eningi enhle, u-Anderson ushilo;
"Ngake ngidlala emigodini yokungcola, bese ngifaka utshani obunobunandi. Ngesikhathi ngingu-13 ngaya eSantos futhi yilapho ngangiqala ukudlala emigodini egcweleyo kanye nokuhlelwa kochwepheshe. "
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Ngemuva kokudlula amaqembu amancane nezinkampani ezincane, u-Anderson unikezwe iqembu lakhe lokuqala le-17 ngesikhathi se-2010 / 2011.
Ukuhlangana noMentor wakhe:
Esikhathini sakhe esilandelayo, u-Anderson wayenamathuba amaningi eSantos kusukela ekuqaleni kweyishumi nanye lapho edlala khona noNeymar. Uthi bewazi?… Nini Neymar wayezibeka njengomdlali ophezulu eSantos, u-Anderson osemncane wayesebenza kancane kancane eqenjini lokuqala.
I-Anderson yaseSantos nethuba lokuqala lafika ngemuva kokulimala Ganso kanye nohlobo olubi luka-Elano, kokubili okwashiya iqembu. UFelipe Anderson wajabulela impumelelo enkulu njengoba enqobe iCopa Libertadores (iSouth America Champions League) kanye neziqu ezimbili zaseSao Paulo State ngaphambi kweminyaka engu-20.
Lokhu kufinyeleleka okumangalisayo kwamenza wahamba ngezinyathelo zakhe ezihlongozwayo e-Barcelona, ​​Juventus, Porto kanye neLazio ngokulandelana.
I-Failed European Move:
Ngo-31 January 2013, ukudluliselwa kuka-Anderson okuvunyelweneyo ku-club yase-Italy Lazio kwehlulekile ngenxa yokufika kwekwephuzile kwefeksi yamazwe ngamazwe okudingekayo evela eBrazil. U-Anderson owakhathazekile kwakudingeka alinde iwindi elilandelayo lokudlulisela iwindi kwezinye ukuhamba kwakhe kweYurophu iphupho.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukudluliselwa kukaFelipe Anderson eYurophu kusalokhu kuxoxisana kakhulu emlandweni webhola (umqondisi wezemidlalo kaLazio u-Igli Tare uqinisekisile).
Lokhu kuqinisekiswa kwenzeke njengoba kunesithakazelo esinikezwe ngumlingani waseBrazil waseBrazil ngokuhlanganyela imali yakhe yokudlulisela okusho ukukhohlakala kwebhola.
U-Anderson wahlala iminyaka emihlanu eLazio lapho ekhombisa khona isikhathi sakhe ekilasini. Umdlali wezemidlalo waseBrazil ubonwe njengomuntu ongayenza lo msebenzi lapho kunesidingo khona kanye nokuhlanganisa ukusebenza kwamathimba weqembu ongasanyakazi futhi I-Savic.
Inhloko yezindaba zika-Anderson sikaLazio ezikhuthazayo zafika ngemuva kokusiza abadlali beqembu lakhe ngokuwina indebe enkulu yase-Italy.
Enye impumelelo eyenziwa nguFelipe Anderson wayese-RIO Olympic. U-Anderson kanye nabalingani bakhe baseBrazil bathathe izwe ngokusindiswa kwezindondo zabo zegolide. Ngokusho kweBrazil, kwakungumzuzu omuhle kakhulu wokuphila kwakhe.
Emva kwalokhu kufezekile, u-Anderson waphinda waba yisithakazelo esivela ku-European clubs. UFelipe Anderson wanquma ukuhlala noLazio. Nokho, waqala ukungabaza neqembu ngemuva kokuwa ngaphandle nomphathi wakhe Simone Inzaghi (umfowethu omncane UFilippo Inzaghi). U-Anderson wabe esenqatshelwe ibheyili futhi ngokusho kwakhe wenqaba ukuyoqeqeshwa nabalingani bakhe.
Lokhu kwaba yisikhathi lapho ehlupheka ngokulimala kwamadolo okwaholela ekulahlekelweni okungaphezu kwesigamu seSerie A. Ngalesi sikhathi, u-Anderson wayazi ukuthi uzobala izinsuku zakhe neLazio ne-Italy.
Ngo-15 Julayi 2018, uFelipe Anderson wanquma ukushiya uLazio ngeWest Ham lapho eqala khona ukubhala uphawu lokubonga ngenxa yentombi yakhe ehlose ibhizinisi u-Evelyn Machry (bheka impilo yakhe yobuhlobo ngezansi ukwazi okuningi ngaye).
Kungakapheli amasonto ambalwa nje ukuba neqembu, uFelipe Anderson waqala ukukhombisa izimpawu ukuthi kungenzeka abe nguWest Ham esikhundleni sikaDititri Payet ukuthi abalandeli balindele. Lokhu kuqinisekiswa njengesikhathi sokubhala. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwawo wonke ama-Brazilian Footballer ophumelelayo, kukhona inkokhelo enhle njengoba kubonakala kumuntu omuhle futhi ohlakaniphile ka-Evelyn Machry.
Iqiniso litshelwe! Ukuthandana okumnandi kukaFelipe no-Evelyn yilokho okuphunyuka ekuhlolisweni kweso lomphakathi nje ngenxa yokuthi ukuphila kwabo ngothando akuyidrama futhi imisebenzi yabo iyahambisana.
Uthi bewazi?... U-Evelyn Machry uyintombi ehlakaniphile eyaziwa ngokuzivocavoca. UnamaMasters ezifundweni zamabhizinisi namaBachelors of International Relations evela eSao Paulo, eBrazil. U-Evelyn ungumqeqeshi wezinkontileka zebhola futhi udlulisela izingxoxisana nesoka lakhe njengenombolo yakhe ye-1 iklayenti.
Umdlali waseBrazil u-Anderson uhlale ethanda intombi yakhe ezindabeni zakhe zezinkontileka nezomnotho.
Ngaphandle kwebhizinisi lokuxoxisana, u-Evelyn Machry ungumama we-bikini njengoba ebonwe kuphrofayli lakhe le-Instagram eligcwele i-bikini kanye ne-beach snaps. U-Evelyn Machry uthumela izithombe zakhe ngokwakhe ngebhayisikili ngenkathi eholidini nalapho ephuma e-gym. Kubalandeli abaningi, uyingane yabaningi bebhishi kunokuba abe negiotiator.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaFelipe Anderson kuzokusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele kuye.
Ukhuluma ngokuphila komuntu kaFelipe Anderson ngaphandle kokusho intombi yakhe, umndeni futhi okubaluleke kakhulu, inja yakhe eyazi okuningi ngomdlalo onjengoba yena no-Evelyn benza.
Inkolo Amaqiniso- Uthando ngoJesu:
Njengoba nje uNeymar, Ander uthanda umculo wevangeli okhombisa izinkolelo zakhe zobuKristu eziqinile. njengoba kubonwe kusuka ku-Instagram post ngezansi.
Nansi elinye iqiniso lezithombe elifakazela ukuthi ikholwa likaFelipe Anderson liqinile.
U-Anderson ungumdlali we-solo othanda ukudlala naye. Ukuba umdlali we-20 kusho ukuthi cishe uthandana nokudlala esikhathini eside esidlule. Udaba luka-Anderson lokudlala kumele luqale ngesikhathi sakhe eSantos.
Umthandi Womculo Omdala-Owenziwe:
Njengoba igazi laseBrazil ligijima emithanjeni yakhe, inkanyezi yebhola ilalela umculo njengokungathi ibhola lakhe. Ithenda elisheshayo lidala njengoba ethanda ukulalela 'Sertanejo', okuyinto uhlobo oluthandwayo oluqanjwe futhi luhlabelelwa ngabalobi bezingoma zaseBrazil ekuqaleni kwama-1920s.
Futhi, uma uFelipe engabambeki emdlalweni we-samba noma ukuqeqeshwa nabalingani bakhe, udlala isiginci esilinye ikhono analo.
KuFelipe Anderson, ukubuyisela emphakathini kubalulekile. Umphakathi lapha uveza abasha bebhola emgwaqweni owodwa waqala uhambo lwakhe lwebhola. Lezi zenzo zembula umuzwa wakhe ojulile wothando, isintu nomqondo wokubonga.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Umzuzwana osuka enhliziyweni ngomndeni kaFelipe Anderson:
Ngenkathi esenesikhathi sakhe esikhulu eLazio, uFelipe Anderson uke wathola izindaba ezimbi ezivela ekhaya. Imibiko yafika yokuthi uyise uSebastião Tomé Gomes uboshwa ngokubulala kabili okwenzeka eSanta Maria, eBrazil.
Ngokombiko wabezindaba waseBrazil uNoticias, leli cala livele engozini yemoto lapho ubaba ka-Anderson Gomes ayenemoto yakhe eshayisa uBruno Santos Silva owayesebhayisekili. Akakwazanga ukumelana namanxeba abhekana nawo ngaphambi kokuba afe. Ngokwendlela ebukeka ngayo, kubonakala sengathi leli cala selixazululiwe kanti nomndeni wesisulu uxazululiwe.
Ngaphandle kwezindaba ezimbi, umndeni kaFelipe Anderson akakaze wabhekana nakho konke okuncane kokuhlangana, ukuthula nenjabulo.
Felipe Anderson Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Izinto ongazi
Njengabadlali abaningi namuhla, u-Anderson uveza izithombe eziningi, eziningi zazo ezingezandleni zakhe zangakwesokunxele kuphela. Wonke umdwebo emzimbeni wakhe unencazelo engokomfanekiso ehlobene nengemuva / imvelaphi yomndeni wakhe. Isibonelo, iziqalo zabo bonke abantakwabo (odade abane nabafowabo ababili) zikhonjiswa ngaphesheya kwezinhlamvu zakhe ze-biceps kanye ne-triceps. Esikhathini esiyinhloko sikaAnderson ikakhulukazi, une-ballerina encane eyanikezela udadewabo omncane uDudley.
Enye i-tattoo ebonakalayo yiyo yeBrazil ukunqoba kwakhe e-201 Rio Olympics. Uma ebuka ikusasa umsebenzi wakhe okwamanje kufanele unikeze, kuqinisekile ukuthi uAnderson uzoba nemifanekiso eminingi emzimbeni wakhe.
Amaqiniso angaziwa ngejubane lakhe:
Abaningi babona u-Anderson njengomxhumanisi ogcwele kahle futhi onomakhono. Uthi bewazi?… U-Anderson uthathwa njengomunye wabadlali abashesha kakhulu emdlalweni wanamuhla. Abalandeli abaningi beFIFA abathanda ukuthola abadlali abasheshayo bangathanda uAnderson kumodi yokusebenza.
Okokugcina, u-Anderson unabalandeli bakhe abathandayo ukuba badlule ngezinganekwane zaseBrazil ezifana noBebeto, Ronaldinho noRonaldo Luis Nazario de Lima. Lokhu kubonisa i-Brazilian iningi lomthandi webhola elidala esikoleni.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Felipe Anderson Ingane kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
U-Willian Childhood Story Plus